အလန်းစား ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်တွေနဲ့အတူ Teaser အသစ်တွေထဲမှာ မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ 2021 Hyundai Bayon ! – MyMedia Myanmar
အလန်းစား ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်တွေနဲ့အတူ Teaser အသစ်တွေထဲမှာ မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ 2021 Hyundai Bayon !
အခု လက်ရှိ Hyundai ကား တွေ အကြောင်းကို ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့ ‌အတော်လေး အရေးပါတဲ့ နေရာတွေလည်း ရှိတယ်ဆိုပေ မယ့် ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာတော့ အနည်းငယ်ပျင်းဖို့ ကောင်းနေပြန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုကုမ္ပဏီရဲ့အသစ် ထွက်ရှိလာမယ့် ဥရောပ အတွက် Entry-Level Crossover ကားဟာ ဆိုရင် Sensuous Sportiness ဆိုတဲ့ စကားရပ်အတိုင်းပဲ Sport ဆန်ဆန် အသွင်အပြင် မျိုးနဲ့ အတူ Polarize ဖြစ်တဲ့ ခေတ်ပေါ် ဒီဇိုင်းပုံစံကိုတော့ မြင်တွေ့ လာရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခု ကားအသစ် ဖြစ်မယ့် Bayon ဟာဆိုရင် Kona လိုမျိုးခပ်လန်းလန်းဖြစ်တဲ့ အသွင်နဲ့ ထွက်ပေါ် လာနိုင်ကာ Split Headlight Design မှာ ဆိုရင်လည်း ပုံစံတူ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အခု ကားအသေး စား တစ်စီး အတွက်ကတော့ အရှေ့ဘက်က Grille ဟာ မြင်တွေ့ရသလောက် ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ အရွယ် အစားနဲ့ ကြီးမားနေတယ်လို့ သိထားရပြီး အပေါ်ပိုင်းက အလျားလိုက် ထည့်သွင်းထားမယ့် Slat ကလည်း LED Daytime Running Lights တွေ အကြားမှာ ကောင်းကောင်း နေရာယူထားနိုင်တာ ကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဆိုပါ Running Lights ‌တွေကလည်းပဲ Kona ဆီကနေ Inspire ယူထားတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားရဲ့ အနောက်ဘက် မှာ လည်း Kona နဲ့ တူညီ တဲ့ အဆုံး သတ်တစ်ချို့ ရှိထားကာ LED Signature နဲ့ အတူ လုံးဝကိုမတူညီတဲ့ Taillights အသွင်အပြင်တွေကို ထည့်သွင်း ပေးထားပြီး မြှား တစ်စင်း အသွင် ဖြစ်အောင် ပုံဖော် ပေးထားပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့် အခု Bayon အသစ်ဟာ Tailgate တွေရဲ့ အကျယ်အဝန်း ကြား မှာ ဖြန့်ကျက်နေမယ့် Light Bar ဒီဇိုင်းရဲ့ ပထမဆုံး ရှေ့ ပြေးကားတစ်စီး ဖြစ်လာနိုင်နေပါပြီ။ အခု ကားအသစ်ရဲ့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေနဲ့ ပက်သက်လို့ တော့ Hyundai ဘက်ကနေ ထုတ်ဖော် ပြောကြားထားတာ မရှိသေးပေမယ့် Bayon ရဲ့ အနေအထားအရတော့ အရမ်းကြီးစိတ်လှုပ် ရှားစရာ ကောင်းတာတွေကိုတော့ မျှော်လင့်ထားလို့ မရသေးတာအမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ Three-Cylinder Power ကို ပဲ အသုံး ပြုလာနိုင်တာ ဖြစ်ကာ Front-Wheel Drive Layout နဲ့ပဲ ပွဲထွက် လာနိုင်ပြီး Manual Gearbox နဲ့ အတူ Dual-Clutch Transmission တို့ကို တွဲဖက် အသုံး ပြုလာဖို့တော့ မျှော်လင့် နိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု ကား အသစ် ကတော့ Ford Puma နဲ့ Toyota Yaris Cross တို့ အတွက် Hyundai ရဲ့ ပြိုင်ဘက်အသွင် ဖြစ်လာ နိုင်ပြီး အခု လိုမျိုး ဆန်းသစ် တဲ့ ခေတ်မီ အသွင် အပြင်ကတော့ သေချာ ပေါက် ထူးခြားနေမှာပါပဲ။ ကားရဲ့ အတွင်း ပိုင်း အရတော့ i20 Supermini ကားနဲ့လည်း အတော်လေး ဆင် တူလာနိုင်ပြန်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Subcompact Hatch တစ်စီး အနေနဲ့ကတော့ Performance N Variant ဖြစ်လာနိုင်ပေမယ့်လည်း Bayon N အမျိုး အစား အတွက်ကိုပါ ဆက်လက် မျှော်လင့်လို့ ရနိုင်သေးတဲ့ အ‌‌နေအထားလဲရှိနေပါသေးတယ်။
ဒါတင် မကသေး ပဲ အခု Subcompact Crossover ကား အသစ်ကို ဥရောပ ဈေးကွက် အတွင်း လာမယ့် ၂၀၂၁ နှစ်လယ် ပိုင်း လောက်မှာတင် စတင် ရောင်းချတော့မှာ ဖြစ်တာကြောင့် တရားဝင် ပွဲထွက် မိတ်ဆက် ပွဲကိုလည်း လာမယ့် ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်လောက် အတွင်းမှာ တင်ကျင်းပ လာနိုင်တော့မယ်လို့ ခန့်မှန်း ရပါတယ်။ အခု မြင်တွေ့ရတဲ့ Spy Shots တွေ အရ တော့ အခုလို သေးငယ်တဲ့ Crossover တစ်စီးကိုတောင် Hyundai ဘက်က ဖန်တီးနိုင်နေတာကြောင့် တိုးတက် လာတဲ့ ဈေးကွက် ပိုင်း အတွက် မော်ဒယ်တစ်ခုအနေနဲ့လည်း အခု ကားအသစ်ဟာ ရပ်တည် လာနိုင်မယ်လို့တော့ မျှော်လင့်ရ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post အလန်းစား ဒီဇိုင်းအသွင်အပြင်တွေနဲ့အတူ Teaser အသစ်တွေထဲမှာ မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ 2021 Hyundai Bayon ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-21T18:01:04+06:30January 21st, 2021|MYCARS MYANMAR|